एउटा साँढेको कारणले यी महिलाले गरिनन् बिहे, परिवारसँग छुट्टिएर साँढेसंग एक्लै बस्छिन् ! – Online Khabar 24
एउटा साँढेको कारणले यी महिलाले गरिनन् बिहे, परिवारसँग छुट्टिएर साँढेसंग एक्लै बस्छिन् !
तमिल लाडू मा बस्ने ४८ वर्षकी सल्बरानीको कहाँनी सुनेर तपाईं हैरान हुनु हुन्छ ।
यी महिला जो आफ्नो पाल्तु सँग एति धेरै माया गर्छिन् उसले मायाको चक्करमा जिन्दगी भरि पनि बिहे गरिनन् ।
Prevबिवाह पछी काजल जोशी अहिले जुम्लामा गएर घर परिवारसँग यसरी रमाउदै छिन (हेर्नुस् भिडियो)
nextअाज केहि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिले अवश्य जान्नुस अाजको तपाँर्इको भाग्यफल !